Waa maxay sababta GUBT | Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Chengdu GUBT Industry Co., Ltd.
Qaybaha xidhashada VSI
AWOODDA SOO SAARINTA
GUBT waxay leedahay 30+ injineero aad u tababaran, 120+ shaqaale aqoon sare leh, 4 aqoon-is-weydaarsiyo shub ah oo aan fidin, 1000+ Molds, qalab tayo leh oo dhamaystiran. Iyada oo leh 30+ sano oo waayo-aragnimo ah xagga soo saarista qaybo burburin tayo sare leh, GUBT waa alaab-qeybiye aamin ah.
GUBT waxay siisaa qaybaha kala duwan ee mashiinada. Daboolista alaabteeda ballaadhan waxay ku siinaysaa ku habboonaanta inaad iibsato alaab dhammaystiran oo isku mid ah hal mar. Waa wakhti-badbaadin iyo kharash-badbaadin.
GUBT waxay leedahay koox iib ah oo caan ah oo leh celcelis ahaan 8-sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah. Waxay yihiin la-taliyeyaal wanaagsan oo ku saabsan doorashada alaabta saxda ah, maaraynta dhibaatooyinka burburiyaha, wax ka qabashada wax soo saarka iyo keenista, iyo bixinta taageero farsamo oo xirfad leh. Waxay diyaar u yihiin caawinta khabiirka 24/7 si ay kuu caawiyaan.
GUBT waxay haysaa hal-abuurnimo waxayna wanaajisaa waxqabadka qaybaha xidhashada. Marka loo eego tirakoobyada aan dhamaystirnayn, macaamiisha isticmaalaya qaybaha burburiyaha GUBT waxay lahaan doonaan 10% -15% nolol dheer oo xiran marka la barbardhigo heerka warshadaha. Waxay noqon doontaa mid aad u badbaado badan oo ammaan ah.
Isniin-Axad. : 7*24
Dhammaan magacyada summadaha, magacyada moodeelka ama calaamadaha waxaa iska leh shirkadahooda. GUBT wax xidhiidh ah kuma laha OEM-yada. Shuruudahan waxa loo isticmaalaa ujeeddooyin aqoonsi oo keliya oo looguma talogelin inay muujiyaan ku xidhnaanta ama oggolaanshaha OEM. Dhammaan qaybaha waxaa soo saaray, oo ay dammaanad qaadeen GUBT oo aanay soo saarin, ka iibsan ama dammaanad qaadin OEM.
fariin noogu soo dir, dhawaan ayaan kula soo xiriiri doonaa.